Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo Baarlamaanka warbixin u gudbin doona. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo Baarlamaanka warbixin u gudbin doona.
Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo Baarlamaanka warbixin u gudbin doona.
Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in kulankooda warbixin uga dhageystaan Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, isla markaana ay mudanaayasha sii amba qaadaan ka doodista akhrinta labaad ee Hindise sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka.
Ajandaha kulanka oo ah warbixinta Guddiga madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa mudanaasha dhageysiga kaddib waxa ay sii wadi doonaan dooddii la xariirtay sharciga Doorashooyinka Qaranka, kaasi oo ay Xildhibaannadu marinayaan akhrinta labaad.
Sharciga Doorashooyinka ayaa maalmihii la soo dhaafay Xildhibaannada Golaha Shacabka waxa ay ka dhiibteen aragtidooda ku aaddan wax ka baddalka sharciga, waxaana dhawaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu Xildhibaannada ka dalbaday inay meel ku qortaan fikirkii ku soo dhaca inta ay dooddu socoto, si ay ugu gudbiyaan guddiga arrintan Baarlamaanka u qaabilsan kahor inta aan la marsiinin akhrinta 3-aad.
“Xildhibaannada waxaan ka codsaneynaa in wixii fikir ah ee ku soo dhaca inta lagu guda jiro akhrinta labaad ee Hindise Sharciyeedka Sharciga Doorashooyinka Qaranka inay soo qortaan oo ay u gudbiyaan guddiga, ka hor inta aan loo gudbin akhrinta saddexaad” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Previous articleRa’iisul wasaare Kheyre oo Dalka Qatar ugu qeyb galaya shirka Madasha Doxa
Next articleMaamulka Mahaddaay oo codsaday gurmad deg-deg ah.